ဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 20, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 14 comments
ယမန်နေ့က အင်းစိန်ထောင်မှ လွှတ်ပေးလိုက်သော နိုင်ငံရေးသမား စာရင်းတွင် ဟေမာနေဝင်း ပါဝင်ပြီး အခြားထင်ရှားသူတဦးမှာ ဗိုလ်ဂျီးဟောင်း နေမျိုးဇင် ဖြစ်သည်ဟု သစ်ထူးလွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြသည်။ ကိုးကား http://www.thithtoolwin.com/2013/05/blog-post_9809.html?utm_source=BP_recent
ခံဝန်ချက်ဖြင့် လွတ်လာသူများအား ပြန်လည်ထောင်ချခွင့်ရှိသည့် ပုဒ်၄၀၁ ဥပဒေကျင့်သုံးမှုအား အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းထုတ်လျင် ကြံဖွတ်ပါတီအမတ် မလိုတမာက တိမ်မည်းဖုံး ကန့်ကွက်သွားမည်ဟု ဆိုခြင်းအပေါ် ဘွားဒေါ်ဂျီးမှ လမင်းထိန်ဗျူဟာ ရှာဖွေနေသဖြင့် စစ်အုပ်စုဖက်ကလည်း နေမင်းသူရိန်ထိုးစစ် ဆင်နွှဲသွားရန်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံရေးသည် အပြောကျယ်သော စတြာဝဠာဂျီးထဲ စက်ပျက် မျောနေသော အာကာသယဉ်သဖွယ် ဘယ်သောဝ်ဘယ်ကမ်း ဆိုက်မည်သိရန် ခဲယဉ်းကြောင်း ဆိုကြသည်။
ကြက်သန်းတရာရှိလျင် ဘဏ်ဒါရိုက်တာ အရွေးခံနိုင်ကြောင်း မွေးရေဘဏ်မှ ဆိုသဖြင့် ဦးကြောင်ကြီး ကြက်ခြံ ခိုးဝင်၍ သန်းအကောင်တရာတိတိ ယူဆောင်ပြီး သွားရောက်အရွေးခံရာ ၎င်းလျောက်လွှာအား အရည်အချင်း မပြည့်မှီဆိုကာ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူ ဦးလျောင်ကီးမှ ပယ်လိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးပျံရထား စီမံကိန်းမတိုင်မှီ မိုးစိုရထားအဖြစ် မြို့ပတ်ရထားတွဲများတွင် ခေါင်မိုးဇကာပေါက် နေမှုအား ပြင်ဆင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ရထားဝံဂျီးဌာနမှ ကြေငြာသည်။
ဝစစ်တပ်တွင် ရှိထားသော တရုတ်ပြည်လုပ် စစ်ရဟတ်ယဉ် ဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်ဖြုတ်ထားသော ရဟတ်ယဉ် အခွံသက်သက် ဖြစ်ကြောင်း ဝစစ်ဦးဇီးဂျုပ် ကြေးမုံဂျီး၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် ဝနယ်ဒေသခံ အရာရှိ တဦးအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းက ရဟတ်ယဉ်တွင် အင်ဂျင်ပါမပါ မသိဂျောင်း ဒုံးကျည်လက်နက်တော့ မြင်မိဂျောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်အိမ်တွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်သော art gallery တွင် ဂေဇက်ရွာ ပန်းချီပြင်ညာရှံများ စုပေါင်းရေးဆွဲသည့် သဂျီးဦးခိုမ် ပုံတူအား တာနောယက္ခ ဘီလူးအမည်ဖြင့် ခန်းမအလယ် တည့်တည့်တွင် ချိတ်ဆွဲဂုဏ်ပြုထားဂျောင်း ပြခန်းအရက်ဘား မန်နေဂျာ ဖားပြုတ်ဂျော်နီအောင်ပုမှ သတင်းပေးပို့သည်။
ဓါးမဝါဒီ ဘီလူးဦးခိုင် ပုံတူ
မီညောင်ခွီးဂရား ဦးကြောင်ကြီး အပ် ဂလာရီဆိုင် ဖွင့်ပွဲအား နွားဝဒေးလမ်းရှိ ၎င်းနေအိမ်တွင် ကျင်းပကြောင်း သဒင်းစာတွင် ယနေ့ ကြော်ငြာထားသည်။ အဆိုပါ ဂလာရီတွင် စက်ချုပ်အပ်၊ ဆေးထိုးအပ်၊ ဂုံနီအိတ်ချုပ်အပ် ပါမကျန် အပ်ကြီးအပ်သေး ဆိုက်အစုံ တင်ပြ သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဦးကြောင်ကြီးက အေးချမ်းစွာ နေလိုသည့်အတွက် အိမ်တွင် အဲယားကွန်းဆယ်လုံး တပ်ထားသော်လည်း လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်မလာ၍ ပူလောင် နေရကြောင်း ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အင်တာဗျူးတွင် ယပ်ခပ်ရင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ ပန်းဆယ်မျိုးကို ၎င်းမှ မြှင့်တင်ပေးမည့် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၁ – ရေပန်း ၂ – လေပန်း ၃- မီးရှုးမီးပန်း ၄ – ငရဲပန်း ၅ – ခွေးသေးပန်း ၆ – ပန်းနာရင်ကြပ် ၇ – ပန်းသေ ၈ – ရာပန်းဆီ ၉ – ရင်ကြပ်ပန်းနာ ၁၀ – ပန်းသေး တို့အားရွေးထားကြောင်း ဖြေကြားသွားသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်မှုဇောင်အဖွဲ့ဝင် ရဲရဲတောက် ဦးကြောင်ကြီးအား ပါတီကျားပျံရေးကော်မတီ တာဝန်ခံ ခန့်အပ်လိုက်ရာ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် တိရစ္ဆာန်ရုံတွင် အတွဲသွားချောင်းသည်ဆိုခြင်း မမှန်ဘဲ ကျားဂျီးအား ငှက်နှင့်မျိုးစပ်ရန် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လေ့လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီလှိုင်းဂျာနယ်တွင် ရေးထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပြုလုပ်ထားသော စာချုပ်များမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိ၍ အသစ်ပြန်လည် ချုပ်ဆိုသင့်ကြောင်း ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များမှ ပြောဆိုခဲ့အပြီး ပထမဆုံး အနေဖြင့် တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးနှင့် တရုတ်မခြစ်သူ ဦးကြောင်ကြီးတို့ လျှို့ဝှက် ချုပ်ဆိုထားခဲ့သော လူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်ပုန်း စာချုပ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ စာချုပ်ပါအချက်များမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်၍ မနှောင့်ယှက်ရန် မီဒီယာအား ပန်ကြားထားသော်လဲ ကြေးမုံဂျီးမှ အလွတ်စုံထောက် မိုက်ခဲဂျာ်နီအောင်ပုအား ဦးကြောင်ကြီး ခြေလှမ်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် ငှားရမ်းထားကြောင်း အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေ၊ ညကလပ်၊ တည်းခိုခန်းများမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ဝတပ်ဖွဲ့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ် တောင်းဆိုချက်အား လွှတ်တော်တွင် တင်ပြပေးရန် အစိုးရမှ ဝမော်ဒယ်လ်ဂဲ ဆယ်ဦးအား ဆင့်ခေါ်ထားကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနှာပွမှ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ တင်ပြပွဲအား ရွှေသံလွင် စကိုင်းနက်ရုပ်သံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသသွားမည်ဟုလည်းဆိုသည်။
ယူအက်စ်ရောက် မြန်မာများ ပြန်လာကြရန် ဝါရှင်တန်မြို့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် သမဒဂျီးဦးသိန်းစိန် ပြောကြားလိုက်ပြီး သူကတော့ ပင်စင်ယူသည့်အခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အခြေချရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒီသတင်းတော့ ပါဘူးလား ..
ဒီသတင်းစာပုံမှန်မထွက်ဘူးပဲ။ မျှော်နေတာကြပေါ့။ ထွက်ချင်ထွက်မယ်။ ထွက်လာမှထွက်မယ်။ ထွက်တော့မှပဲဖတ်ကွယ်ဖစ်နေဒယ်။ အပါတ်စဉ်မျှော်နေဘာဂျောင်းရယ်နှင့် ပန်းဆယ်မျိုး အား ကျောင်းသုံး ပြဋ္ဌာန်းဘုတ်အုပ်တွင်ထည့်သွင်းသွားမည်ဟုကြားရပါဂျောင်း။
ဟေမာနေဝင်းက နံမယ်တူတာ လားငင် ဘာမှုနဲ့လဲ ပြောကြပါအုံး တားတားကို၊ ဒီတတင်းစာ ဖတ်ကိုဖတ်ရမယ့် တတင်းစာပဲ
သန်းအကောင်တရာတိတိ ယူဆောင်လာနိုင်တာကိုတောင် အရည်အချင်း မပြည့်မီဘူးလို့ ဆိုပြီး ပယ်ဖျက်တာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက် လိုအပ်ရင် နေ့စား၃၀၀၀ နဲ့ အငှားလိုက်မယ့်သူတွေ ခေါ်ပေးမယ်။
မိုးစိုရထားဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာ မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို မြန်မာပြည်သူားတွေ ရရှိအောင် ကြိုးစားပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ :harr:
ပန်း၁၀မျိုး ကို ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှုကြောင့် ကြောင်ကြီးအား ပန်း၁၀မျိုးလုံး ပေးအပ်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပါတယ်။
ထိုက်တန်စွာ ချီးမြှင့်မြှောက်စား ကြပါကုန်………….. :harr:
အခုချိန်မှာ ၊ အီတွန့် ဗွမ် တစ်ယောက် ဆိုမယ့် သီချင်းလေးကတော့
ကြောင်ကြောင် ရေ သိပ်ညစ်တယ်…..
အစွဲကြီး စွဲ မိပြီ ရှန် ( ဟာသတွေ ရေးတာကို ပြောပါတယ် )
မြန်မာစာကိုပဲ..နားမလည်လို့ ..အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်နေရတယ်ကွယ်..အသက်ကပဲကြီးလို့လား..နားမလည်တော့ဘူး.နည်းနည်းပီအောင်ရေးပါလား. ..တွယ်..သောင်ကီးရယ်..
အူးကြောင့် သတင်းတွေ ဖတ်ရတာ..
ဟယ်… ကိုအလင်းဆက်တစ်ယောက်…သများဒွေထက် ရမှတ်နည်းတယ်…။ (-1) တဲ့…။ ကရော်…ကရော်…:P
ဒဲ့… ခိခိ… ခိခိ